समानान्तर Samanantar: 2012
Posted by Govinda at 11/27/2012 01:19:00 PM No comments:
महाभारतका दुई पात्र शल्य र शकुनि नकारात्मक चरित्र हुन्। यी दुवैको भूमिका भने बेग्लाबेग्लै छ। शकुनि दुर्योधनलाई उक्साएर गलत बाटामा लगाउँछ। शल्य कर्णको तेजोबध गर्छ। बहिनी गान्धारीमाथि भएको अन्यायको बदला लिन गान्धारको राजपाठ छाडेर हस्तिनापुरमा बसेको शकुनिले दुर्योधनमा उद्दाम महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रमा चरम पुत्र मोह जगाएर महाभारत युद्धको बीउ रोप्यो। झुक्किएर दुर्योधनको अतिथि सत्कार ग्रहण गरेको शल्य कौरवका पक्षबाट युद्धमा सामेल त भयो तर उसको निष्ठा र माया पा48डवका पक्षमा रह्यो। नकुल र सहदेव शल्यका भानिज जो थिए। शकुनि र शल्य दुवैले महाभारत युद्धमा प्राण त दिए तर वीर कहलिएनन्। शल्य र शकुनि सल्लाहका लागि योग्य पात्र थिएनन्। कारण, तिनको नियत सही थिएन।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि नागरिक समाजका केही सदबहार 'अगुवा'सँग अन्तर्त्रि्कया गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ। छापाका आएका तिनका कथन हेर्दा केहीले शल्यको र अरूले शकुनिको भूमिका पूरा गरेझैँ लाग्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शकुनि शैलीको प्रशंसा मन पर्छ। यो मानवीय कमजोरी हो। यी सामान्य कोटीका नेताहरू यस्तो कमजोरीबाट मुक्त नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर शकुनि सल्लाहले भलो चाहिँ गर्दैन। यस्तो सल्लाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मात्र कुभलो हुने भए अरूले चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। तर, माओवादी-मधेसी मोर्चाको अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर आन्दोलनले झन् बलियो बनाउने वा अराजकता उत्पन्न गरेर मुलुकलाई अर्को अधिनायकको पासोमा पार्ने सन्देह पनि उत्तिकै बलियो छ। यसैले अहिले तमासामात्र हेरेर बस्ने बेला छैन। मुलुक डरलाग्दो भासमा धसिँदै जाँदा पनि निस्पृह भएर बस्न त कि त पूरै ज्ञानी हुनुपर्छ नभए अबोध अज्ञानीले मात्र सक्छ। अहिलेको आन्दोलन बिजुली, पानी आपूर्तिका लागि वा पेट्रोलको पैसा सस्तो बनाउन हुनलागेको पक्कै हैन। यसैले अहिले जति नै चर्को स्वरमा समर्थन गरे पनि सफल हुने लक्षण नदेखिँदासम्म सहरबजारको मध्यम वर्ग आन्दोलनमा सामेल हुनेछैन।
संविधानसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुने सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको मागका लागि भएमात्र आन्दोलनले जनसमर्थन पाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको यस सरकारले चुनाव गराउन सकेन। यथार्थमा त गराउनै खोजेन। नियत नराम्रो नभएको भए प्रधानमन्त्री भट्टराई या त सहमतिका लागि सरकारबाट हट्नुपर्थ्यो नभए चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यस दिशामा इमानदार प्रयासमात्र पनि गरेको भए सम्भवतः विपक्षीले आन्दोलनको बाटो रोज्ने थिएनन्। कारण, अहिलेका विपक्षी नेताहरू आन्दोलनका लागि बनेजस्ता जो देखिँदैनन्।
सत्तारुढ माओवादी-मधेसी मोर्चा चुनाव गराउनै चाहँदैन। त्यसैले सरकार कटुता र अविश्वास बढाउने खेलमा लागेको छ। राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेर हुन्छ कि विपक्षीमाथि दोष थुपारेर हुन्छ चुनाव टारेर सरकार लम्याउने लोभमा सत्तारुढ गठबन्धन निहुँ खोज्दैछ। विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनै गर्दैनन् वा गरिहाले पनि जनताले साथ दिँदैनन् भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाका नेताले ठानेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अगुवाले स्पष्ट शब्दमा आफू कता भन्ने बताइदिएको भए सम्भवतः विपक्षी नेताले पनि बाटो खुट्याउन सक्ने थिए। यस्तै, आन्दोलनको सल्लाह दिनेले अहिले राजनीतिक नेताहरूसँग पुरानो हिसाब खोज्नु हुने थिएन। नेताहरूको पुरानो भूमिका कोट्याउनु तिनको तेजोबध गर्नुजस्तै हो। कर्णको रथ हाँकेर गएका शल्यले 'तिमी अर्जुनसँग लड्न सक्तैनौ' भनेजस्तो।
नागरिक समाजका अगुवाले नेताहरूसँग त हिसाब मागे तर ऐना भने हेरेनन्। यीमध्ये कतिपयले त माओवादीलाई सत्ता सुम्पे मुलुकमा 'राम राज्य' आउँछ भनेका थिए। बाबुरामको शासन त माधव नेपाल वा झलनाथको भन्दा पनि नराम्रो हुनुपुग्यो। यसमा नागरिक समाजका यी अगुवाले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने हैन? यिनले आत्मालोचना गर्दैनन्। किनभने, यिनमा केही शल्य छन् र केही शकुनि छन्। फरक यत्ति हो यिनलाई आन्दोलन विफल भए पनि नाफै हुन्छ र सफल भए पनि नोक्सान हुँदैन। आधुनिक शल्य र शकुनिले महाभारतमा ज्यान गुमाउनु जो पर्दैन।
बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नु पर्ने हो भने सबै ध्वस्त पार्ने मनःस्थितिमा देखिन्छन्। उनलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताजस्ता बुर्जुवा विषयको चिन्ता नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताका लागि सत्ता नभूतो नभविष्यति ! मौका परेका बेलामा सकेको लुट्नेबाहेक तिनको अरू कुनै अभीष्ट देखिँदैन। यसैले, यिनलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलन अपरिहार्य छ। यस्तो आन्दोलनको अगुवाइ नागरिक समाज वा ट्रेड युनियनले गर्ने पनि होइन। राजनीतिक दलले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अरू समर्थकले त पछि लागेर बल दिने हो। त्यसले आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन र सहभागिता बढाउँछ।
लोकतन्त्रैका लागि यसरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपर्दा जनतामा क्षोभ उत्पन्न भएको हुनसक्छ। यसैले नेताहरूले यस पटक आन्दोलनको शैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बन्द, चक्का जाम, टायरको धुवाँ र तोडफोड मुक्त आन्दोलन गर्नसके जनतामा नेताहरूप्रति रहेको वितृष्णा कम हुनेछ। सत्तामा जानका लागि हैन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न यसको माग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सहमतिमा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठनबाहेक अरू माग नराख्ने र आन्दोलनकारी दलका नेता प्रधानमन्त्री नहुने घोषणा गर्ने हो भने जनसमर्थन बढाउन सजिलो हुनेछ। ( नेताहरूलाई जनताको विश्वास भए यस्तो सल्लाह जनस्तरमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जनसमक्ष पुग्न र तिनको विचार जान्न निकै सहज भएको पनि छ।)
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले लोकतन्त्रैका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोजेका हुन् भने सत्याग्रहको बाटो रोज्नु उचित हुनेछ। दुवै दलका केही शीर्ष नेताले आमरण अनशन सुरु गरे भने नैतिक वैधता गुमाएको सरकार सहजै परास्त हुनसक्छ। नेताहरूको अनशन आन्दोलनप्रति जनसमर्थनको मापक पनि हुनेछ। अधिनायकवादी शासकलाई परास्त गर्ने बलियो हतियार अहिंसा नै हो। त्यसमा पनि आमरण अनशन सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। शल्य र शकुनिहरूको उक्साहटमा जनतालाई कष्ट हुने सडक आन्दोलन गर्दा मुलुकको हित हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा त्यसको दुष्प्रभाव जो पर्छ। जनतालाई दुःख दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि आफूले कष्ट सहेर लोकतन्त्र बलियो बनाउने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर इमानदारीसाथ खोज्नुपर्छ।
Posted by Govinda at 11/20/2012 12:47:00 PM No comments:
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबी विपक्ष दलका हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिक वैधताको सम्मान गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका भए आफूले घोषणा गरेको चुनाव हुननसक्ने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट पन्छिनुपर्थ्यो। तर, घोषितरूपमै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली विरोधी भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छाडेनन् भनेर गुनासो वा टिप्पणी गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। भट्टराईका लागि त 'नैतिकता' बुर्जुवाहरूको पाखण्डमात्रै हो। तर कांग्रेसका नेताहरूले उनैको अनुसरण गर्न मिल्दैन। कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखिका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता संशोधन नहुँदासम्म त लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि महत्व दिनैपर्छ। यसैले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वभन्दा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको संकट चुनावबाहेक अरू उपायबाट समाधान हुँदैन। जस्तोसुकै विकल्प अपनाए पनि अन्ततः चुनाव त गर्नैपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका सुहाउँदो उदारता र सुझबुझ देखाउन सके माओवादी र मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान बाध्य हुनेछन्। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दागर्दै पनि लचिलो हुनुपर्छ। माओवादी सिद्धान्ततः अधिनायकवादी दल हो। यसका नेतामा सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट निर्देशित हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले उनीहरू सरकारमा नबसी चुनावको सामना गर्ने कल्पनै गर्न सत्तै्कनन्। उनीहरू जनतामा हैन कार्यकर्तामा भर पर्छन्।
कांग्रसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने हो भने उसको छविका कारण निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता पक्कै पनि बढी हुन्छ। विगत संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको नेतृत्वमा भएर त्यस्तो परिणामा आएको भए त्यसले मान्यता पाउन सजिलो हुने थिएन। तैपनि, माओवादी र मधेसी कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुँदैनन् भने त्यसलाई निर्वाचनै नगर्ने निहुँ बन्न दिनु बुद्धिमानी होइन र त्यो लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियताको हितमा पनि हुँदैन। यसैले कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्नु उचित हुँदैन।
कांग्रेसलाई सहमतिका नाममा अलोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र निर्णयमा फसाउने प्रयास माओवादी नेताहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् र अब पनि गरिरहने छन्। संविधानका विषयवस्तुमा अहिले सहमति गर्ने प्रस्ताव यसैको उदाहरण हो। संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानमा राख्ने प्रावधानबारे अरू कसैले निर्णय गर्नु जनताको अधिकारमा अतिक्रमण गर्नु हो। लोकतन्त्रमा जनताको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न वा छेकथुन गर्न मिल्दैन। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपूर्व कांग्रेसले थुप्रै सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेकै कारण निर्वाचनपछि पनि मुलुकले गति र दिशा लिन पाएन। अब पनि कांग्रेसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आफ्नो सिद्धान्तविपरीत सम्झौता गर्योि भने मुलुक पुरानै अनिश्चितताको दुश्चक्रमा फस्नेछ। संसदीय पद्धतिलगायत उदार लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा नेपाली कांग्रेसले सम्झौता गर्नुहुँदैन। जनताले अनुमोदन गरेनन् भने त्यसलाई सजरूपमा स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ तर आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता छाड्नु हुँदैन। पार्टीको सिद्धान्त र संगठन जोगियो भने सत्तामा त ५० वर्षपछि पनि पुग्न सकिनेरहेछ। अस्वाभाविक गठबन्धन गरे जनताले स्वीकार गर्दा रहेनछन्। बेलायतको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि गत निर्वाचनमा सत्तामा पुग्नु र स्थानीय निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिनुबाट नेपाली कांग्रेसले सिक्नुपर्छ।
माओवादी पनि मुलुकलाई अनिर्णयको दुश्चक्रमा फसाएर सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहँदैन भने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने नै हो भने पनि बाबुरामलाई हटाएर अर्को कसैको नेतृत्वमा विगत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको अनुपात र क्रममा सानो चुनावी सरकार बनाउन कांग्रेस तत्पर हुनुपर्छ। चुनावमा सत्तामा नबसे पनि खासै फरक पर्दैन तर, चुनावलाई सहज बनाउनेबाहेक अरू सम्झौता चाहिँ गर्नु हुँदैन। ( यसै पनि अबको प्रशासन यन्त्रले चुनावी सरकारको अनुचित दबाब पक्कै स्वीकार गर्नेछैन। चुनावपछि अख्तियार धाउने रहर त बाबुराम भट्टराईले वरीयता मिचेर बढुवा गरिदिएका मुख्यसचिवले समेत नगर्लान्। )
राजनीतिक दलका नेताहरू केही गर्न पनि सहमत नहुने हो भने दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ : कि त राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने नभए चिट्टा हालेर सरकार बनाउने। यी दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउनु पर्यो् भने 'पाटने प्रधान' बनेर सत्ताको खेलमा रमाउन चाहने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले 'डाडुमा पानी तताएर डुबे' हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि जनताले कठै भन्ने छैनन्। बरु, ताली नै बजाउनेछन्।
Posted by Govinda at 11/06/2012 06:36:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 11/01/2012 10:52:00 AM 1 comment:
१ आज सुवर्ण स्मृति प्रतिष्ठानले िवचार गाेष्ठी आयोजना गरेको रहेछ । निम्ता पाएर पनि जान सकेकोमा थकथकी लागेको छ । त्यहाँ पक्कै पनि सुवर्णजीको योगदानको चर्चा भयो होला । नेपालको राजनीतिमा थुप्रै चटकेहरू निकै चर्चित भए । नेपाली कांग्रेसले नै उपेक्षा गरेपछि अरूले सुवर्णजीको कदर गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो भने नेपाली कांग्रेसका आजका नेताहरूबाट कृतज्ञताको अपेक्षा गर्नु पनि सायद उत्तिकै मूर्खता हुन्छ । तैपनि यस्ता सार्वजनिक अवसरहरूमा मन नलागे पनि व्यक्तिको योगदानबारे बोल्नैपर्ने हुन्छ । तेसैले नेता र अरू वक्ताका मधुरवाणी सुन्न मन लागेको हो ।
२ सुवर्ण शमशेर राणा अद्वितीय राजनीतिक नेता हुन् । मुलुकमा क्रान्ति गर्न शासक परिवारका सदस्यले ज्यानको बाजी लगाएको उदाहरण संसारमा अरू पनि धेरै होलान् । तर क्रान्तिका लागि दुई दुई पटकसम्म सम्पत्ति लगाएको र त्यसको प्रतिफलसमेत कहिल्यै नखोजेको उदाहरण मैले अन्त कतै पढ्न पाएको छैन । उनले झैँ पार्टी संचालनका लागि कार्यकर्तामात्र हैन नेतालाई समेत निजी ढुकुटीबाट खर्च भर्ने अर्को व्यक्ति पनि नेपालको राजनीतिमा अर्को कोही छैन । उनका समकालीन र अहिलेका शिर्ष नेताहरूमा सुवर्णजीले भरेको मानो नखाने पनि कोही नहोलान् । जेलमा पर्दासमेत सुवर्णजीले जनही दैनिक खर्च दिन्थे रे ।
३ अार्थिकबाहेक सुवर्णजीका अरू योगदान पनि उल्लेखनीय छन् । उनैले २००७ को जनक्रान्तिमा मुक्ति सेनाको संगठन गरेका हुन् । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि उनैको हो । सत्याग्रहका पक्षमा रहेका बीपी पछिमात्र सशस्त्र क्रान्तिका लागि तयार भएका हुन् ।
४ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका प्रथम प्रणेता पनि सुवर्णजी नै हुन् । उनले दरबारिया भाषामा भने । जनताले बुझेनन् । बुझ्नेले अहिले पनि बुझ पचाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रबिना देशको अस्तित्त्व नजोगिने हुनाले प्रजातान्त्रिक विकासका लागि राजालाई सहयोग गर्ने भनेर त सुवर्णजीले २०२५ सालमै भनेका हुन् । बीपी र सुवर्ण दुवैले राजालाई एउटा राष्ट्रिय शक्ति ठानेर मेलमिलापको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनीहरू राजाको निरंकुश शासनका समर्थक वा निरपेक्ष राजतन्त्र समर्थक हैनन् ।
४ गणेशमान सिंह ठूला विद्रोही हुन् । प्रधानमन्त्रीको पद अस्वीकार उनको त्यागभन्दा विद्रोह हो राजाले दिएको पद किन लिने भन्ने मानसिकता उनमा बलियो थियो । सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । संसदीय दलमा सुवर्णजीको बहुमत पुग्थ्यो । बीपीले नै पनि छाड्नसक्थे । सुशीला भाउजु रमाएकी थिइनन् । राजा र भारत दुवै सुवर्णजीका पक्षमा थिए । तैपनि सुवर्णजीले बीपीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । सुवर्णजीको त्यागको चर्चासम्म पनि हुँदैन ।
५ नेपाली कांग्रेसले सुवर्णजीकै नेतृत्त्वमा २०१२ मा समाजवाद अपनायो । गणेशमानजीलाई हराएर सुवर्णजी कांग्रेस सभापति चुनिएका थिए । तर २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएपछि उनले सभापति पद बीपीलाई सुम्पे ।
६ सुवर्णजी सम्भ्रान्त थिए तर सामन्त थिएनन् । यही उनको कमजोरी बन्यो । बीपी वा गणेशमानजी महान् हुन् । सुवर्णजीको योगदानको कदर गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठा कम हुने थिएन । सुवर्णजीका सन्तान पनि उनको गरिमा धान्नसक्ने प्रकारका भएनन् । तैपनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सुवर्णजीको योगदानको सम्मान र अभिलेखन त हुनुपर्ने हो । बैगुनी समाज उँभो लाग्दैन भन्ने कतै पढेको थिएँ । राष्ट्रमाथि बैगुनीको कलंक नलागोस् ।
Posted by Govinda at 10/31/2012 06:34:00 PM No comments:
संविधान सभालाई प्राप्त जनादेशको अवधि दोब्बर लम्ब्याउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नेहरू त्यही विफल संस्था ब्युँताएर राज गर्ने खेलमा लागेका छन्। मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, 'शीर्ष' नेताहरूको नालायकी र सत्तालिप्साले पहिलो संविधान सभा विफल भएको हो। यसैले यिनै नेताको नेतृत्व रहुन्जेल अर्को निर्वाचन भए पनि संविधान सभाले काम गर्न पाउँदैन भन्ने तर्कमा दम छ। (तर, नेता पार्टीले बदल्ने हो। नेपालमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्वबाट हट्ने चलन छैन। बरु नेतृत्व छाड्नुपर्यो भने पार्टी नै फुटाउने कुसंस्कार राजनीतिक संस्कृति बनेको छ। यसैले २० वर्षसम्म महाधिवेशन नगरे पनि पार्टी उसैको पेवा भइरहन्छ। संसद्को चुनाव हार्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा हारेपछि पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्न अप्ठेरो मान्दैन। परन्तु, ठूलै चमत्कार नभए राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएका यस्ता नेताबाट नेपालको राजनीति अझै केही वर्ष मुक्त हुने लक्षण छैन। नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्दा यस यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिँदैन। सायद, यही कारणले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि धेरैजसो विफल भइसकेकै सूत्र दोहोर्याअइरहन रमाउने गर्छन्। उनीहरू दुनियालाई मूर्ख ठान्छन् र आफ्ना स्वार्थ, सनक र लहडअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरूलाई लाभ हुने हो भने मूल्य-मान्यता, नीति, कानुन, संविधान सबै 'सहमति' का नाममा मिच्छन्।) एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरू दलमा रहेका उनका मतियारहरूको संविधान सभा ब्युँताउने प्रस्ताव यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।
अवधि समाप्त भएर अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संविधान सभा ब्युँताएर जनताकै नाममा संविधान पारित गर्ने लहड असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक र अनैतिक प्रयास हो। सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको संविधान सभाको आयु समाप्त भइसकेको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त दुई वर्षको जनादेश त झन् उहिल्यै सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अन्तिम अदालत घोषित गरेको छ। यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संविधान सभा ब्युँताउनु असंवैधानिक हुन्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताले पनि यति नबुझेका हैनन्। यत्ति हो, उनीहरू जानजान यसको अवज्ञा गर्न चाहन्छन्। दाहाललगायत्का राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफू सर्वशक्तिवान् भएको भ्रम छ। साथै, संविधानभन्दा माथि भएको देखाउने रहर पनि छ। यसैले उनीहरू संविधान सभा ब्युँताएर संविधानलाई सहमतिका नाममा कागजको खोस्टो सिद्ध गर्ने दुश्चेष्टामा लागेका छन्। किन्तु, उनीहरूको यो प्रयास संवैधानिक र नैतिक दुवै कसीमा अवैध हो।
मुलुकको मूल कानुन जनताका प्रतिनिधिले नै बनाउनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जनादेश आवधिक हुन्छ। जनताले निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन्। विफल संविधान सभाको निर्वाचन दुई वर्षका लागि भएको हो। संविधानको मर्म मारेर त्यसको अवधि अर्को दुई वर्ष बढाइयो। संविधान भने बनेन। संविधान सभालाई शीर्ष भनिएका नेताहरूले काम गर्नै दिएनन्। सहमतिका नाममा विधि र प्रक्रियाको सधैँ उपेक्षा गरियो। पछिल्लोपटक अवधि थप गर्नु त अक्षरशः पनि अवैध हुन्थ्यो। यसैले जनादेश र वैधता समाप्त भइसकेको संविधान सभा ब्यँुताएर संविधान पारित गर्नु राजनीतिक पाखण्डमात्र हुन्छ। जनादेश गुमाएको अवैध संस्थाले जनप्रतिनिधित्वको दाबी गर्न सत्तै्कन। त्यसैले संविधान सभा ब्युँताएर पारित गरिएको संविधानलाई जनताले बनाएको मान्न मिल्दैन। नेपाली जनतालाई शासन गर्ने मूल कानुन जारी गर्ने अधिकार 'नयाँ राजाहरू' लाई पनि छैन। सहमतिका नाममा लोकतन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता मिचेर जनतामाथि संविधान थोपर्ने अभ्यास अलोकतान्त्रिक हो।
घोषित समयमा सम्पन्न हुन नसके पनि संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। संविधानको निर्देशअनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अरू दलका नेताको सहमतिमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्थ्यो। गरेनन्। त्यो उनको बदमासी हो। त्यत्तिले निर्वाचन घोषणा अवैध हुँदैन। अरू दलका नेताले पनि निर्वाचनको विरोध गरेका छैनन्। आफैँले घोषणा गरेको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको अक्षमता हो। उनलाई पदबाट हटाएर निर्वाचनका लागि सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुको साटो संविधान सभा ब्युँताउन खोज्नु भने राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ' हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको उदाहरण संविधान सभाका हकमा दिन मिल्दैन। यी दुवै संस्थाको प्रकृति नै भिन्न छ। उतिबेला निर्वाचन हुन नसक्ता प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने शेरबहादुर देउवा 'अक्षम' प्रधानमन्त्री ठहर भई बर्खास्त गरिएका थिए। संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै बहाल छन्। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहितको माग राखेर नेपाली जनताले चर्को आन्दोलन गरेका थिए। अहिले नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा वा संविधान सभा ब्युँताउने पक्षमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन भएको छैन। तेस्रो, त्यतिबेला जनआन्दोलनकारी शक्तिको निर्देशमा राजाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेका थिए। अहिले राष्ट्रपतिले केका आधारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिचेर संविधान सभा ब्युँताउने? संविधान सभा ब्युँताउन राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान मिच्न हुने हो भने शासनमा अरू हस्तक्षेप गर्न किन नहुने? राष्ट्रपतिलाई शासनमा सक्रिय बनाउने हो भने ताजा जनादेशका लागि चुनावी सरकार बनाउन किन नलगाउने? यसैले राजनीतिक दृष्टिमा पनि संविधान सभा ब्युँताउने आधार छैन।
केही राजनीतिक दलका नेताले आ-आफ्नो स्वार्थअनुरूप सहमतिको नाटक गर्दैमा त्यो वैध र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्नु मल्लकालको अन्त्यतिर 'पाटनका ६ प्रधान' ले राजकाजमा गरेको मनपरीलाई उचित र वैध मान्नुजस्तै हो। यसैले बलमिच्याइँ र अराजनीतिक अहंकारबाहेक संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न मिल्ने आधार देखिँदैन।
यस स्थितिमा, बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि सत्ता छाडेर नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नु विद्यमान संकटबाट मुक्त हुने सबैभन्दा उत्तम उपाय देखिन्छ। उनले हठ नछाड्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत्का दलसामु तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो, भट्टराई सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र दोस्रो उनै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने। अहिलेको अवस्थामा यी दुवै विकल्प सहज र स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसो हो भने सरकारमा सामेल नभएर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु उचित हुनेछ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा बदमासी गर्न थाल्यो भने बहिष्कार गर्न त जुनबेला पनि सकिन्छ नि!
एमाले त सरकारमा सामेल भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म ठूलो पार्टी बन्न सकेको छैन। बरु २०५१ को निर्वाचनमा सरकारमा नभए पनि एमाले प्रमुख पार्टी भएको थियो। कांग्रेसले अहिलेसम्म सबै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, पाँच वटामध्ये २ वटा निर्वाचन हारेको छ। अर्थात्, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन बढी चनाखो हुने हो भने सरकारमा नभए पनि फरक पर्दैन। जनतालाई मुखै नदेखाउनेहरूका लागिमात्र निर्वाचनका बेला सत्ता नभई नहुने हो। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यति बुझ्नुपर्ने हो नि!
संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हुन्। जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारमा हस्तक्षेप सह्य भएन भने त्यतिबेला 'पाटने प्रधान' हरूकै नियति शीर्ष नेताहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ। त्यतिबेला अहिलेका आसेपासेले पनि साथ छाड्नेछन्। एकाध वर्ष ढिलो-चाँडो होला तर जनताले आफ्नो अधिकारको अभ्यास पक्कै गर्नेछन्। जनताको अधिकार खोस्दा राजतन्त्र समाप्त भएजस्तै त्यही बाटामा हिँड्दा 'नेतातन्त्र' पनि सिद्धिनेछ। सायद, नियतिलाई यही मन्जुर छ।
Posted by Govinda at 10/30/2012 07:55:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 10/25/2012 05:34:00 PM No comments:
(कुर्सीको तातो 'ढिकीको पुछारमा गाडिएको घन'जस्तै हुन्छ कि कुन्नि सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिले औकात बिर्सन्छ। त्यतिमात्र हैन आफूलाई सर्वशक्तिवान्, अजर र अमर पनि ठान्दो रहेछ। नत्र, घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसकेपछि सरकारबाट हट्ने सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति माग्ने अधिकार छैन' भन्ने थिएनन्। )
संविधान सभाकै अर्को चुनाव २०६९ साल मंसिरमा गर्ने घोषणा अरूले नभएर बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन्। त्यसबेला उनले अरू दललाई थाहै नदिएर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका थिए। घोषित मितिमा चुनाव भएन। नहुनु आश्चर्यको विषय पनि थिएन। मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो। लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नुपर्थ्यो। घोषणा गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ। तैपनि सत्तामा जुगाझैँ टाँसिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर नसोधे के सोध्ने? ‘तपाईँलाई कहिलेसम्म सरकारमा बस्न मन छ?' भनेर सोध्ने?
अहिले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको छैन। त्यसैले धारा ४३ पनि सक्रिय नै छ। ‘नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन' शीर्षकको त्यस धारामा लेखिएको छ- ‘(१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्युनतम् साझा कार्यक्रम हुनेछ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्दा यो धाराको अन्तःस्थलमै प्रहार गरिदिए। गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैमा खतरा त यो संविधान विफल भएमा उत्पन्न हुने हो। यसैले गणतन्त्रमा खतरा छ भने संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्न ‘राजासँग सहकार्य' गर्ने माओवादीबाटै छ।
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारभूत चरित्रमा आवधिक निर्वाचन पनि पर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनविना लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनपुग्छ। भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सत्तै्कन भन्ने अरू दलले भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि बाटो खोल्नुपर्नेमा चुनाव कहिले हुने भनेर सोध्नसमेत पाइँदैन भन्नुभन्दा ठूलो अराजनीतिक बलमिच्याइँ के हुन्छ?
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई वर्तमान संविधानले नै यसको संरक्षण र पालना गर्ने दायित्व दिएको छ। त्यसमाथि अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ? भनेर सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली नागरिकलाई छ। देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भए नागरिकको त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने सरकारको कर्तव्यै हो। अधिनायकवादी सत्तामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन। राष्ट्रपतिले ‘चुनाव कहिले हुने हो?' भनेर सोध्दैमा तर्सिनुको कारण बाबुरामको अधिनायकवादी चाहना नै हुनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट उनमा ‘हुकुमी शासन' चलाउने महत्वाकांक्षा निकै बलियो रहेको जो स्पष्ट हुन्छ।
सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित बाबुराम भट्टराईमा अधिनायक बन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन तर अहिलेको संविधानअनुसार सर्वसत्तावाद लाद्न मिल्दैन। जति नै कमजोरी भए पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार शासन गर्न जनादेश चाहिन्छ। जनादेश लिने वैध र सर्वस्वीकृत उपाय आवधिक निर्वाचनै हो। यसैले संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य पालन गर्नैका लागि पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग चुनावको मिति सोध्नैपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले चुनावको मिति सोधेर संविधानको पालना गरेका छन्। तर, उनले अनौपचारिकरूपमा हैन, अब सरकारलाई पत्र लेखेरै निर्वाचनको मिति सोध्नुपर्छ। अनिमात्र, संविधानको धारा ३६ क ‘(३) संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' अनुसारको दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भावभंगीमा हेर्दा उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छाड्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उनलाई हटाउने आधार संविधानमा स्पष्ट छैन। यही संवैधानिक कमजोरीका कारण उनको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा उर्लेर गएको हुनसक्छ। सहमति नभई बाबुराम नहट्ने र उनको पार्टी, केही मधेसी दल सरकारमा बस्न पाउन्जेल सहमति गर्दै नगर्ने? काँधमा चडेको समुद्री बूढालाई हटाउन सिनवादले गरेजस्तै चलाखी नगरी सहज समाधान निस्कने देखिँदैन। अब कि त अरू राजनीतिक दल र नेपाली नागरिक सबैले माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो। त्यस अवस्थामा जनताको भूमिका किनाराका साक्षीमा सीमित हुनेछ। सत्ता संघर्ष भए नै पनि बाबुराम र पुष्पकमलहरूबीच हुनेछ। त्यस्तो संघर्ष रक्तरञ्जित पनि हुनसक्छ।
माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने (गर्नु पनि हुँदैन) राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलहरूले संस्थागत निर्णय गरेर यो सरकार हटाएर चुनावी सरकार गठन गरी संविधानको संरक्षण गर्न विधिवत् औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गरेर अर्को सरकार बनाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति सामना गर्न पनि अरू दलहरू तत्पर हुनुपर्छ। यो सायद, कम क्षति हुने विकल्प हो।
लठ्ठी नभाँची सर्प मार्ने हो भने बाबुरामलाई हटाउन अरू दल विशेषगरी कांग्रेसले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई कांग्रेस भएको प्रचार सत्ता नछाड्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको हो। यसैले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराउनु उचित हुन्छ। चुनावी जित-हारभन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बढी महत्वपूर्ण हो। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैमा जितिन्छ भन्ने पनि छैन। कांग्रेसले नै २०५१ र २०६५ मा हारेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने वा त्यो पनि हुन नसके राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराए हुन्छ। कसैलाई मन्त्री बनाउन पनि पर्दैन। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवहरूलाई अख्तियारी दिए हुन्छ। बढीमा ६ महिना त हो। यद्यपि, सबैभन्दा उत्तम उपायचाहिँ राजनीतिक सहमतिमै अर्को सरकार बनाउनु हो। चुनावमा जाने सहमति भइसकेपछि पुनः संविधान सभा ब्युँताउने वा संविधानबारे सहमति गर्ने भन्नु सत्ता नछाड्ने राजनीतिक धुर्त्याइँमात्रै हो।
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। लोकतन्त्र भए राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिले लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्ता जताततै व्यक्त हुन थालेको छ। यसैले कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई सत्ताभन्दा बढी महत्व दिनुपर्छ। नत्र, दुवै जोगिने छैन र कांग्रेस पनि त्यसको दोषभागी हुनेछ। त्यसपछि त झन् कांग्रेस सत्तामा कहिल्यै पुग्ने छैन।
कात्तिक २, २०३० मा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या भएको थियो। पञ्चायती शासकले गराएको मानिएको नृशंस हत्याको छानबिन भने हुन सकेन। श्रद्धाञ्जलीस्वरूप ‘नेपाल पुकार' मा २००७ सालको जनक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा उनले लेखेका केही पंक्ति उद्धृत गरौँ :
‘नेपालको प्रगतिशील संस्था नेपाली कांग्रेस हो। अतः नेपालको भविष्य कांग्रेसमाथि नै निर्भर छ। कसैले पनि (यो) बिर्सनु हुन्न। हाम्रो पनि कर्तव्य हो हामी अगाडि बढौँ र कांगे्रसलाई देशको सर्वोदयको अग्रदूत बनाउँ्क, निकट भविष्यमा हुने जनआन्दोलनको निम्ति तयार रहूँ। नेपाली कांग्रेसले पनि पाइला बढाउँदा फुकीफुकी बढाउनुपर्छ।'
(नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालाले लेखेजस्तै ‘प्रगतिशील संस्था' बनाउनसक्ने हो भने कांग्रेस अझै पनि मुलुकको मियो बन्न सक्छ। अन्योल र लोभमा बाँचेर प्रगतिशील बनिँदैन। ‘फुकीफुकी' पाइला चाल्नुको अर्थ गतिहीनता पनि हैन।)
Posted by Govinda at 10/16/2012 08:33:00 PM No comments:
कपिलवस्तु नरसंहारपछि मनको वेदना कागजमा पोखेको रहेछु । पुरानो नोटबुकमा भेटेँ ।
अख़बार, रेडियो र टीवी च्यानलसँग
काठमाडौंलाई नदुखेको कपिलवस्तु
नदुखेको यो घाउ
कोट्याई कोट्याई भो नदुखाऊ
काठमाडौं त उत्सवमा रमाइरहेको छ
इन्द्र जात्रा छ
इन्डियन आइडल छ
( प्रशान्त तामांगलाई भोट दिन काठमाडौंमा देखिएको उत्ताउलो व्यग्रतामा प्रहार गरेर पत्रकार चन्द्र किशोरले कपिलवस्तु नदुखेको गुनासो गरेका थिए ।)
कपिलवस्तु दुख्न मुटुमा ठाउँ छैन ।
यहाँ त उत्सव पो छ !
यहाँ गिरिजाबाबु छन्
कमरेड प्रचण्ड छन्
उनीहरूका चण्डमुण्ड छन्
कांग्रेस एकीकरणको माचो छ
माओवादीलाई सत्तामा फर्काउनु छ
कपिलवस्तुको आर्तनाद सुन्ने
तेहाँ के पो भइहालेको छ र?
केही मारिएका छन् रे
केहीको घर खरानी भएको छ रे
केही हजारको उठीवास भएको छ रे
केहीको वास रुखमुनि छ रे
केही चेलीको बलात्कार भएको छ रे
यस्ता दिनहुॅ हुने घटनालाई
ठूलो ठानेर साध्य चल्छ र?
शासन चलाउन सकिन्छ र?
काठमाडौं त नयाँ नेपालको तयारीमा व्यस्त छ
संविधान सभाको चुनाव गर्नु छ
देशको भाग्य बनाउने व्यक्ति छान्न
उमेदवारको बन्दसूची बनाउनु छ
देशलाई गणतन्त्र बनाउनु छ
के के गर्नु छ !
सानोतिना क़ुरामा अलमलिने
फुर्सद कहाँ हुन्छ ?
यस्तो बेलामा नदुखेको कपिलवस्तुको घाउ कोट्याई कोट्याई
किन उप्काउनु परेको ?
रामदेवको योग शिविर छ
कांग्रेसको संयुक्त महासमिति छ
अनमिनका इयान मार्टिन
महत्त्वपूर्ण समाचार हुने यति धेरै विषय छन्
तेतै ध्यान केन्द्रित किन नगरेको ?
काठमाडौंलाई कहिल्यै नदुख्ने
कपिलवस्तु किन कोट्याएको ?
Posted by Govinda at 10/15/2012 06:31:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 10/14/2012 07:00:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 10/10/2012 10:24:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 10/09/2012 03:27:00 PM No comments: